Incwadi yeminqweno yomtshato: yendabuko, yokudala, ngezandla zabo. Indlela yokwenza ifowuni yomtshato.
Kulo mbini, umtshato ungumzuzu womlingo wothando nolonwabo. Zizungezwe yintsapho kunye nabahlobo, iintyatyambo kunye noxolo, amazwi amnandi kunye nesifiso somsindo, umculo omnandi. Ukubhala izibilini ezilungileyo kwaye ufumane isilwanyana esifanelekileyo sifanele ufunde inqaku elithi " Ndiyakuvuyela kwaye ndinqwenela umtshato " kunye " noMtshato weMitshato wokugubha umtshato ." Unqwenela njani ukuba inxalenye yeholide ihlale ngonaphakade nabasanda kutshata. Ukuze kugcinwe iinkumbulo kwaye kukho incwadi yeminqweno yomtshato. Ukuyila kwayo kubonakalisa isimo sengqondo somtshakazi nomyeni, isitayela somcimbi ngokwawo. Emva kweminyaka emininzi, ubuyekeze i-albhamu yomtshato, isi sibini sinokuziva sincinane kwaye sinothando. Namhlanje sithetha malunga naluphi uhlobo lweencwadi ezinqwenelekayo ezenzekayo kunye nendlela enokuzenza ngayo ngokwabo.
Ziziphi iincwadi zomnqweno zomtshato
Ngoko, masiqale ngokukhetha kwendabuko. Incwadi enqwenelayo ifom ekhuni enephepha elingenanto ngaphakathi. Kuzo, iindwendwe zingabhala ukubingelela kwabo bantu abancinci, banokubamba amakhadi okubulisa, iifoto, iintyatyambo ezomileyo.
Umhlobiso ophezulu wencwadi yisikhuselo. Iyakwazi ukusetyenziswa kwanoma yisiphi isitayela, gcina umbala kunye nesigqibo sendlela yomtshato. Ukuba i-albhamu yezifiso zithengwa okanye zenziwe ukuba zilandelwe, ngoko amaphepha kunye ne-binder ayonwabisa iliso ngegolide nangesilivere ekugqibeleni, usebenzisa i-satin, i-embroidery, i-rhinestones kunye nobuhla. Ngoku kutshanje, iincwadi ze-scrapbooking zifumana ukuthandwa, xa iphepha ngalinye lihlobo lombala weklagi kwiifoto, iphepha elimibalabala, ukufakelwa kokuhlobisa.
Indlela yokwenza incwadi yesifiso emtshatweni
Iingcamango zokubhalisa zingaba zininzi, kuxhomekeka kwiingcinga kunye nobuchule bentsha. Nazi iindlela ezithandekayo:
Uyilo lwencwadi luyakwazi ukuphinda umhlobiso wesigqoko somtshakazi kunye nombala walo wokubala.
Yonke into yokushicilela emtshatweni, kuquka neencwadi, iimemo, amakhadi okuhlala, izikhumbuzo zeendwendwe zingabakho kwisimo esinye.
Kwikhuselo ungafaka umfanekiso wabasandul 'ukutshata, okwenziwa kwindlela yokungaqhelekanga: iphazili, iifrescoes, imizobo eboyiweyo, iicatricic. Ngendlela, umfanekiso ungathatha indawo ngokwayo. Vumela iintwendwe zibhale iimfuno kwiindawo ezingenanto zengxowa, ngoko umfanekiso unokufakwa kalula kwisakhelo kwaye uxhome eludongeni.
Kwitheyibhile ecaleni kwincwadi yesifiso ungafaka ikhamera ye-Polaroid kunye ne-scotch. Izivakashi zithatha isithombe uze unamathisele.
Ukuba uchitha umtshato wangaphandle kwimeko, umzekelo, elwandle, sebenzisa ukulungiswa kwamatye amancinci kunye nama-seashells.
Incwadi yeminqweno yomtshato ngezandla zabo
Indawo engavumelekanga kwi-albhamu yomtshato yendabuko ngumthi. Inokwenziwa nakweyiphi na ubuchule kunye nasiphi na isitayela, ngaphandle koko, umthi onqwenela ukwenza kube lula ukwenza ngesandla. Nazi iindlela ezimbalwa.
Ikhetho 1: umthi wesithathu
amahlamvu ukwenza isiseko (ubude kunye nemali kuxhomekeke kwingcinga yakho);
i-vase okanye ibhodwe, apho umthi uza kutyalwa (kufuneka ube ngokwaneleyo kwaye uzinzile);
isiponji esikhulu seentyatyambo (ungayithenga kwisitolo seentyatyambo);
amatye ahlobisa, iiglasi, njl .;
amakhadi ngeenqweno ze-9x5 cm. Ukuma kwamakhadi kunokuba yiyiphi na, kwinqanaba eliphezulu kuyimfuneko ukwenza imbobo ye-tape engekho ngaphantsi kwe-1 cm ububanzi;
ezininzi iidibhoni (ngamanani amakhadi) 10 cm;
ibhendi ebanzi yokuhlobisa i-trunk.
Siqokelela amahlumela ndawonye, ​​ukuthembeka "isiqu" singahlanganiswa ndawonye. Sifaka umthi kwisiponji esiqhakazile, usibeke ebhodweni kwaye usilungise ngoncedo lwamacwecwe. Amasebe kunye ne-vase kunokukhangeka ngegolide okanye isilivere yepende, kwaye umgqomo uhlanganiswe ngebhebhoni (into ephambili kukuthi "ityala" kwi-glue). Imihlobiso eyongeziweyo yintsimbi, iintsimbi okanye iingaphetha. Umthi ulungele. Emtshatweni, uyifake etafileni eyahlukileyo, ecaleni kwimiqolo yokubeka amakhadi kunye neekhephe ezikhethiweyo. Izivakashi zibhalela iimfuno zabo kumakhadi kwaye zibophe ezicatsheni.
Inketho yesibili: imithi enemibala
Inguqu elula yomthi kwiinqwenela ukuyibeka kwisiqwenga samaphepha. Amahlamvu angenziwa kwindlela yokwenza isicelo. Kwiindawo ezikhululekile zephepha, iindwendwe ziya kuba nokubhala amagama anomusa.
Injongo engaphezulu yokudala ukwenza inkenki emnyama njengesiseko somthi: i-trunk kunye namagatsha amancinci. Ukuba awukwazi ukudweba, khangela itemplate okanye umfanekiso ogqityiweyo kwi-intanethi. Iindwendwe zisebenzisa iipalati zamanwe kunye nezandla zazo zenzele amafomati emthi wakho, khawujonge isithombeni.
Kubalulekile ukuba ungayikhohlwa ukubeka iifutha ezimanzi etafileni.
Iincwadi ezingavumelekanga ngeenqweno zomtshato
Ukuba ukhetho lwemveli lwencwadi yomtshato lubonakala lungathandeki, nantsi ezinye iimbono zokuyila ukudala:
Ubulumko phezu kwamatye. Khetha ipebble enkulu yeendwendwe apho iindwendwe zingabhala umbhalo wazo. Emva koko la matye makabongwe. Ngesifiso, nayiphi na enye into ifanelekileyo: iiplati zokubhabisa, iindidi zeeyi, ibhodi yokusika kunye ne-pin pin. Zingasetyenziswa kwimpilo yemihla ngemihla kwaye zikhumbule umhla womtshato wawo.
I-stylistics yeposi eyaziwayo iyakwazi ukuxhaswa ngeposikhadi kunye nezifiso kwiibhotile ezincinci.
Kulula ukwenza udonga olukhethekileyo ukuvuyisana. Ingaba ifomati enkulu-fomathi kwisakhelo esikhethekileyo okanye i-slate.
Ukufumana iifoto, ama-initials of newlyweds ayenziwa rhoqo. Ngethuba lesidlo, iindwendwe ziyakubhalisela kubo kwaye zihambe zivule.
Ukuba umtshato ulandelela umxholo womculo, unako ukubhala izifiso kwiirekhodi zakudala ze-vinyl.
Ingcamango enhle ye-Retro ibhokisi leposi. Umntu ngamnye umvakalisi ubhala incwadi kubasandul 'ukutshata, uyayifaka emvulophu aze ayibeke kwibhokisi encinane yeposi kwitafile.
Naluphi na uhlobo lwencwadi yeenqweno ozikhethayo, khumbula ukuba ufanele uyithande, kwaye ungaphenduli yonke imifashini yefashoni. Iimbono ezilungileyo kunye nokuphefumlelwa!
I-High Heel Wedding Shoes
Yintoni ekhokelela ekudleni i-tshokoleta eninzi?
Iintlonelo kwizingane zasenkulisa
Ulwaphulo lwe-Microcurrent, u-facelift, isifuba, iinkunzi
Indlela yokutya kwiHlabathi yeHlabathi
Izindlela ezili-10 zokutshintsha ubomi beentsapho
U-Irina Grinyova waphenduka waba ngumfazi omdala oneminyaka engama-44 ubudala, umfanekiso
Indlela yokunyamekela kakuhle umzimba kunye neenwele?
Unokwenza njani iinwele ezinokukhanya, ezinqabileyo, ezonwebileyo?
IiVithamini ngobuhle bemilomo
Umdlali ongumdumikazi u-Alisa Grebenshchikova